Ungayifaka kanjani iminwe kowesifazane: amathiphu namasu | Amadoda aSitayela
Uyifaka kanjani iminwe kowesifazane
Impilo yomuntu yocansi ayinayo imithetho noma iziyalezo. Akuyona into esingayisungula njengesisekelo futhi esebenza kuwo wonke umuntu ngokulinganayo. Kodwa-ke, kunezindlela ezithile eziyisisekelo ezivame ukusebenzela abantu abaningi. Kulokhu, namhlanje sizokhuluma ngakho ungayifaka kanjani iminwe kowesifazane. Uma ufunda lokhu kungenxa yokuthi awucaci kahle uma ukwazi ukunikeza intombazane yakho yonke injabulo ofuna ukuyinika yona.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela ukuthi ungayethula kanjani iminwe yakho kowesifazane nokuthi yini okufanele uyicabangele ukunikeza injabulo ephezulu.
1 Uyifaka kanjani iminwe kowesifazane
2 Uhlelo oluyisisekelo
3 Uyifaka kanjani iminwe kowesifazane bese ushaya indlwabu i-clitoris
4 Amaphutha amaningi ajwayelekile
Amadoda amaningi agxila kakhulu ezikhundleni ngesikhathi sokungena hhayi kakhulu kwi-foreplay nokuthi anganikeza kanjani injabulo. Mhlawumbe udinga ukufundela omakoti besikhathi esizayo abafikayo noma ukunikeza intombazane yakho yonke injabulo emfanele. Ubulili bungaphezulu kokungena nje nokufuna isikhundla esifana namavidiyo we-porn. Ukudlala kuyadingeka, ikakhulukazi uma uke waba nomlingani ofanayo isikhathi eside. Kujwayelekile ukuthi owesilisa aqede ngaphambi kowesifazane, okwenza ukuthi kudingeke impela ukuthi aqhubeke nokudlala ngezitho zomzimba wakhe ukuze owesifazane akwazi ukufinyelela kwi-orgasm.
Siyazi ukuthi ukushaya indlwabu kowesifazane kuyinkimbinkimbi, ngakho-ke, sizochaza ukuthi ungayifaka kanjani iminwe kowesifazane. Inkinga ukuthi owesifazane ngamunye ngumhlaba ohlukile futhi kujwayelekile ukuthi abesilisa banesikhathi esilula kakhulu sokufinyelela ku-orgasm. Uma ungamazi lo wesifazane, ukumshaya indlwabu kungaba yinselele. Kukhona abesifazane abathanda ukufinyelela kwi-orgasm ngokuvuselela i-clitoris futhi kukhona nalabo abathanda ukufinyelela esimweni sezulu ngokungena noma okunye. Owokuqala uhlukaniswa njenge-clitoral kanti owesibili ubhekwa njengowesifazane.
Uma inhloso eyinhloko ukunikeza injabulo enhle ngezandla zakho, kufanele uqinisekise ukuthi owesifazane ufinyelela i-orgasm. Ukufunda ukufaka iminwe yakho kowesifazane kubalulekile ukuze unikeze injabulo kowesifazane onani.
Sizohlaziya ezinye zezici eziyisisekelo ezidingekayo ukuze ufunde ukuthi ungayifaka kanjani iminwe kowesifazane. Kufanele wazi kahle izindawo ezine-erogenous abesifazane abanazo ezingxenyeni zabo ezisondelene kakhulu. Lezi izingxenye eziyinhloko:
IVulva: Yonke le ndawo ifaka i-clitoris, i-urethra, i-labia, kanye nokungena kwesitho sangasese sowesifazane. Akufanele ungene kuphela kepha futhi udlale kuzo zonke lezi zindawo, uguqule isikhuthazi ngempendulo oyibona kuyo.
Clitoris: ukuphela kwesitho somzimba wabesifazane umsebenzi waso omkhulu ukuletha injabulo. Abesilisa abaningi abayitholi kahle i-clitoris futhi ifana nokhakhayi oluncane. Kwabesifazane abaningi i-clitoris iyisihluthulelo sokufinyelela i-orgasm. Kunezinkulungwane zezindlela zokuvuselela lesi sitho futhi kufanele sithole indlela yokuzivumelanisa nokuthanda kowesifazane ngamunye.
Unyaka: Kuyingxenye yomzimba wesifazane engakhuthaza uma uphakathi kocansi.
Uyifaka kanjani iminwe kowesifazane bese ushaya indlwabu i-clitoris
Lapho sesazi ukuthi ingxenye ngayinye ikuphi, sekuyisikhathi sokungena ebhizinisini. Into emnandi kakhulu kwabesifazane abaningi ukuvuselelwa i-clitoris yabo. Indlela elula yokuthola ukuvuselela i-clitoris ukuyigcoba ngeminwe emibili noma emithathu ndawonye. Qaphela ukuthi ungayenzi ibe namandla kakhulu ngoba iyindawo ebucayi kakhulu futhi ingalimaza kalula. Kuyathakazelisa ukuthi iminwe igcotshiswa ngamathe noma nganoma iyiphi i-lubricant.
Ungakwenza ngokuvundlile noma okuyindilinga. Qaphela ukwehla nokwehla njengoba kungaba yinto engathandeki ngokwengeziwe ukushaya umchamo ngephutha. I-urethra yindawo lapho abesifazane bechama khona. Ukuzijabulisa okukhulu kufanele usebenzise izandla zakho zamahhala ukukhuthaza ikhasi. Ungafaka okukodwa, okubili noma okungaphezulu kokukabili kule ndawo. Sizochaza kahle ukuthi ungayifaka kanjani iminwe yakho kowesifazane.
Indawo ye-G-spot iyahlukahluka kuye kowesifazane. Akuhlali kuyindawo efanayo ngaso sonke isikhathi. Kodwa-ke, iningi labo bonke abesifazane linalo odongeni lwangaphambili lwesitho sangasese sowesifazane. Ngokuqondile, itholakala phakathi kwamasentimitha angama-5-8 ngaphakathi kwesitho sangasese sowesifazane. Ukuze ukwazi ukushaya indlwabu leli phuzu elingenakuqhathaniswa, kufanele ubeke iminwe yakho ku-C ukuze ukwazi ukucindezela kule ndawo okukhulunywa ngayo. Khumbula ukuthi yonke iminwe kufanele ibheke phezulu. Uma usuneminwe yakho ngaphakathi, ungazama ukuhla unyuka, phansi ngapha nangapha futhi ngokushesha.
Kumele uqaphele futhi ususe ekuphenduleni kwentombazane yakho. Qhubeka uvivinye kancane ukuze ubone ukuthi iziphi izinto ezenza intombazane yakho ibe nokuzijabulisa okwengeziwe. Kukhona abesifazane abathatha isikhathi eside ukufinyelela kwi-orgasm, ngoba nakho kusengqondweni. Ukuzethemba nezinga lokuvuka kubalulekile ekuzuzeni i-orgasm yabesifazane.
Amaphutha amaningi ajwayelekile
Sizosebenzisa amaphutha avame kakhulu ukwenzeka lapho sifunda ukufaka iminwe kowesifazane bese senza ucansi. Lawa amaphutha amakhulu:
Ukungazinakekeli izandla zakho: izandla akufanele ziphelelwe amanzi futhi zinezinzipho ezinde. Futhi kulula ukuthi zihlanzeke.
Ukungayitholi i-clitorisYize lokhu kuyinto eyisisekelo, kunamadoda amaningi akuthola kungalungile.
Ungasebenzisi i-lubricant: Yize lokhu kudingekile kubo bonke abesifazane, kulula ukuthi zonke izindawo zitholakale kahle.
Lingisa ukungena komunwe
Ukugxila esithweni sangasese
Kungcono ukusebenzisa izinto zobuchwepheshe.
Sebenzisa lezi zinto njengesandulela.
Njengoba ukwazi ukubona, kunezindlela eziningi zokujabulisa owesifazane futhi ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nokuthi ungayifaka kanjani iminwe yakho kowesifazane.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Kufanelekile » Izithandani Nezocansi » Uyifaka kanjani iminwe kowesifazane